1. उच्च रक्त ग्लुकोज स्तर को कारण के हो?
धेरै चीजहरु उच्च रक्त ग्लुकोज स्तर को कारण हुन सक्छ, तर हामी के खाने रगत को शर्करा मा वृद्धि मा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ। जब हामी कार्बोहाइड्रेट खान्छौं, हाम्रो शरीरले ती कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोजमा रूपान्तरण गर्दछ, र यसले रगतमा चिनी बढाउन भूमिका खेल्न सक्छ। प्रोटीन, एक निश्चित डिग्री को लागी, उच्च मात्रा मा रगत मा शर्करा को स्तर बढाउन सक्छ। बोसोले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउँदैन। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल मा वृद्धि को लागी नेतृत्व रगत मा शर्करा को स्तर लाई बढाउन सक्छ।
२ टाइप १ र टाइप २ मधुमेह बीच के फरक छ?
टाइप १ मधुमेह एक स्वत: प्रतिरक्षा अवस्था हो कि शरीर को इन्सुलिन उत्पादन गर्न असमर्थता मा परिणाम हो। टाइप १ मधुमेह बाट पीडित व्यक्तिहरु लाई ग्लुकोज स्तर सामान्य सीमा भित्र राख्न को लागी इन्सुलिन मा हुनु पर्छ। टाइप २ मधुमेह एक रोग हो जसमा या त शरीर इन्सुलिन उत्पादन गर्न सक्षम छ तर पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्षम छैन वा शरीर प्रतिक्रिया गर्दैन। उत्पादित इन्सुलिन को लागी।
३. मलाई मधुमेह छ भने कसरी थाहा पाउने?
मधुमेह धेरै तरिका मा निदान गर्न सकिन्छ। यसमा एक उपवास ग्लूकोज> वा = १२6 mg/dL वा mmmmol/L, एक हीमोग्लोबिन a1c .5.५% वा सो भन्दा बढि, वा एक मौखिक ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण (OGTT) मा ग्लूकोज को उच्च स्तर शामिल छ। यसको अतिरिक्त,> २०० को अनियमित ग्लुकोज मधुमेह को सुझाव हो।
जे होस्, त्यहाँ संकेत र लक्षणहरु छन् कि मधुमेह को सुझाव दिन्छ र तपाइँ एक रगत परीक्षण प्राप्त गर्न मा विचार गर्नु पर्छ। यी धेरै तिर्खा, बारम्बार पेशाब, धमिलो दृष्टि, स्तब्धपन वा extremities को झिंगा, तौल बढ्नु र थकान समावेश छन्। अन्य सम्भावित लक्षणहरुमा पुरुषहरु मा स्तंभन रोग र महिलाहरु मा अनियमित अवधि शामिल छन्।
४. तपाइँ कति पटक मेरो रगतको ग्लुकोज परीक्षण गर्न आवश्यक छ?
आवृत्ति जसमा तपाइँ तपाइँको रगत को परीक्षण गर्नु पर्छ उपचार पद्धति तपाइँ मा साथै व्यक्तिगत परिस्थिति मा निर्भर हुनेछ। २०१५ एनआईसीई दिशानिर्देशहरु को सिफारिश छ कि टाइप १ मधुमेह संग मानिसहरु आफ्नो रगत ग्लुकोज प्रति दिन कम्तीमा ४ पटक परीक्षण, प्रत्येक खाना भन्दा पहिले र सुत्नु अघि।
5. सामान्य ग्लुकोज स्तर कस्तो हुनुपर्छ?
तपाइँको स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्नुहोस् के एक उचित रक्त शर्करा दायरा तपाइँको लागी हो, जबकि ACCUGENCE तपाइँको दायरा संकेतक सुविधा संग दायरा सेट गर्न संग मद्दत गर्न सक्छ। तपाइँको डाक्टर लक्षित रक्त शर्करा परीक्षण परिणाम धेरै कारकहरु को आधार मा सेट गरीनेछ, सहित:
मधुमेह को प्रकार र गम्भीरता
● कति लामो समय देखि तपाइँ मधुमेह भएको छ
मधुमेह जटिलताहरु को उपस्थिति
● समग्र स्वास्थ्य र अन्य चिकित्सा अवस्थाहरु को उपस्थिति
अमेरिकन मधुमेह संघ (ADA) सामान्यतया निम्न लक्षित रक्त शर्करा को स्तर को सिफारिश गर्दछ:
Before० र १३० मिलिग्राम प्रति डेसिलिटर (mg/dL) वा ४.४ देखि .2.२ मिलीमिलो प्रति लीटर (mmol/L) खाना भन्दा पहिले
खाना भन्दा दुई घण्टा पछि १ mg० मिलीग्राम/डीएल (१०.० mmol/L) भन्दा कम
तर एडीए नोट गर्दछ कि यी लक्ष्यहरु प्राय तपाइँको उमेर र व्यक्तिगत स्वास्थ्य मा निर्भर गर्दछ र व्यक्तिगतकृत हुनु पर्छ।
6. Ketones के हो?
Ketones रसायनहरु तपाइँको कलेजो मा बनाईएको हो, सामान्यतया आहार ketosis मा हुन को लागी एक चयापचय प्रतिक्रिया को रूप मा। यसको मतलब तपाइँ केटोन्स बनाउनुहुन्छ जब तपाइँसँग पर्याप्त भण्डारण ग्लुकोज (वा चीनी) छैन ऊर्जामा परिणत गर्न को लागी। जब तपाइँको शरीर होशियार छ कि तपाइँ चिनी को एक विकल्प को जरूरत छ, यो ketones मा बोसो परिवर्तन।
तपाइँको ketone स्तर शून्य देखि कहीं3वा माथी हुन सक्छ। तल सामान्य दायराहरु छन्, तर मात्र दिमागमा राख्नुहोस् कि परीक्षण नतिजा फरक फरक हुन सक्छ, तपाइँको आहार, गतिविधि स्तर, र कति लामो समय सम्म तपाइँ केटोसिस मा हुनुहुन्थ्यो।
7. मधुमेह केटोएसिडोसिस (DKA) के हो?
मधुमेह ketoacidosis (वा DKA) एक गम्भीर चिकित्सा अवस्था हो कि रगत मा ketones को धेरै उच्च स्तर बाट परिणाम हुन सक्छ। यदि यो पहिचान गरीएको छैन र तुरुन्तै उपचार, तब यो एक कोमा वा मृत्यु को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ।
यो अवस्था तब हुन्छ जब शरीर को कोशिकाहरु ग्लुकोज को उपयोग गर्न को लागी ऊर्जा को लागी असमर्थ छन्, र शरीर को सट्टा ऊर्जा को लागी बोसो भंग गर्न शुरू हुन्छ। Ketones उत्पादन गरिन्छ जब शरीर को बोसो तोड्छ, र ketones को धेरै उच्च स्तर रगत अत्यधिक अम्लीय बनाउन सक्छ। यही कारण हो कि Ketone परीक्षण अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण छ।
8. Ketones र आहार
जब यो शरीर मा पोषण ketosis र ketones को सही स्तर तल आउँछ, एक उचित ketogenic आहार कुञ्जी हो। धेरै मानिसहरु को लागी, यसको मतलब प्रति दिन 20-50 ग्राम carbs को बीचमा खाने। प्रत्येक macronutrient को कति (कार्ब्स सहित) तपाइँ उपभोग गर्न को लागी फरक फरक हुनेछ, त्यसैले तपाइँ एक केटो क्यालकुलेटर को उपयोग गर्न को लागी वा तपाइँको स्वास्थ्य हेरचाह प्रदायक संग मात्र कन्सुलेट गर्न को लागी तपाइँको सटीक मैक्रो आवश्यकताहरु लाई बुझ्न को लागी आवश्यक छ।
9. यूरिक एसिड के हो?
यूरिक एसिड एक सामान्य शरीरको फोहोर उत्पादन हो। यो तब बन्छ जब प्युरिन नामक रसायनहरु टुट्छन्। प्यूरिन शरीरमा पाइने प्राकृतिक पदार्थ हो। उनीहरु धेरै खाद्य पदार्थहरु जस्तै कलेजो, शेलफिश, र रक्सी मा पाइन्छन्।
रगतमा यूरिक एसिडको उच्च एकाग्रताले अन्ततः एसिडलाई यूरेट क्रिस्टलमा रूपान्तरण गर्दछ, जुन तब जोर्नी र नरम ऊतकको वरिपरि जम्मा हुन सक्छ। सुई जस्तै urate क्रिस्टल को जम्मा सूजन र गाउट को दर्दनाक लक्षण को लागी जिम्मेवार छन्।
नि: शुल्क रक्त शर्करा परीक्षण किट, चीनी जाँच मिसिन सर्वश्रेष्ठ कम्पनी, Pneumotachograph Spirometer, उपवास रक्त शर्करा १००, ५.२ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट मेसिन,